I-KDE Gear 21.08.2 yazisa ngaphezulu koPhuculo lwe-XNUMX | Ubunlog
IPablinux | 07/10/2021 15:58 | KDE, Ubuntu
Njengoko bekucwangcisiwe, iQela K Usungule emini le I-KDE yezixhobo 21.08.2. "08" nguAgasti, kwaye u-2 uthetha ukuba luhlaziyo lwesibini lwesondlo iseti yeeapps ezazise ngenyanga leyo. Akukho misebenzi mitsha, kodwa iibugs zilungisiwe, ndicinga kakhulu ngohlobo lwenqaku lesibini. Njengesiqhelo, inani elikhulu lotshintsho kukulungisa iingxaki ngeKdenlive, umhleli wevidiyo ozisa izinto ezininzi ezintsha ekufuneka ziphosiwe ukuze zibuyise umhlaba olahlekileyo malunga nozinzo.
Lilonke, kwi KDE Gear 21.08.2 139 bugs zilungisiwe isasazwe kwizicelo ezinje ngeKdenlive esele ikhankanyiwe, umphathi wefayile weDolphin, umlawuli weetheminali zeKonsole, umbonisi womfanekiso weGwenview, umhleli wombhalo weKate kunye nombukeli wexwebhu leOkular, phakathi kwabanye. Unoluhlu oluncinci lwezinto ezintsha ezichazwe apha ngezantsi.
Ezinye iindaba kwi KDE Gear 21.08.2
Umbono okwahluliweyo ovulwe kwiDolphin awusavali ngokungacwangciswanga xa umsebenzi usebenze okanye ungasebenzi ukuze ukhumbule imeko yewindows yokugqibela evaliweyo.
Xa siprinta uxwebhu kwi-Okular kwaye sikhetha imo yokukala efuna iseto se- "Force rasterization" ukuze isebenze ukuze isebenze, olo seto lwenziwe lwasebenza ngokuzenzekelayo ke akufuneki sazi kwaye sikhumbule ukukwenza ngesandla.
UKate akasabambeki ekuphumeni ngelixa replicode iplagi isebenza.
IDolphin ayisasebenzi ngokufihlakeleyo ivulekile ngasemva emva kokucinezela / ukugcina iifayile usebenzisa imenyu yokuma kunye nokuphuma kwesicelo.
KwiGwenview, ungatshintshela umva phakathi kweendlela zokusondeza kunye neendlela ezimfutshane emva kokuba oku kusandul 'ukwaphulwa.
Amaqhosha angaphambili kunye alandelayo kwibha yolawulo lomdlali we-Elisa ayisasebenzi ngokungafanelekanga xa umzila wangoku umisiwe.
I-Okular ayisavumeli inzame zokugcina kwifayile yokufunda kuphela, endaweni yoko inyanzelisa ukuba ifayile igcinwe kwenye indawo.
UKonsole akasacothisi ukuvala isithuba xa kukho into echwethezwe ngokukhawuleza.
Ukukopa isicatshulwa kwi-Okular ngoku kususa umkhondo wabalinganiswa abatsha.
Uluhlu olupheleleyo lweenguqu, apha.
I-KDE yezixhobo 21.08.2 Ikhutshiwe ngale mvakwemini, oko kuthetha ukuba abaphuhlisi ngoku banokubamba ikhowudi yabo ukongeza kulwabiwo olwahlukileyo lweLinux. Kungekudala, ukuba awukenzi njalo, iya kuza kwi-neon ye-KDE, kamva kwi-Kubuntu + Backports kwaye iya kuthi kwakhona iwele kulwabiwo kwimodeli yophuhliso yiRolling Release.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE Gear 21.08.2 yazisa ngaphezulu koPhuculo oluKhulu kwi-App ka-Agasti